Banyere Anyị - Hangzhou Mingjue Technology Co., Ltd.
Hangzhou Mingjue Technology Co., Ltd. bụ ihe Mmeputa na ahia mwekota ụlọ ọrụ wuru na 2016. Anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ na ụlọ ọrụ atọ dị elu iji nye ngwaahịa dị elu na ụwa. Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ e guzobere, anyị rụsiri ọrụ ike ịghọ onye ndú na laser osise, ịcha na-akanye ụlọ ọrụ. Anyị bụ ndị ọhụụ. Anyị bụ ndị nsogbu nsogbu. Anyị na-agba mbọ ka emebe na-enye ndị kasị elu-edu laser usoro ụwa.
Hangzhou Mingjue Technology CO., LTD bụ ọkachamara na R & D, mmepụta na ahịa nke CO2 laser osise na ịcha igwe, galvanometer laser igwe, eriri laser ọnwụ igwe na laser marking igwe. Ngwaahịa na-ekpuchi ihe karịrị ụdị 100.
Ngwa a gụnyere mbipụta dijitalụ, textiles, uwe, akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ anụ, akwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe, inye ihe, mgbasa ozi, mbipụta akwụkwọ na nkwakọ ngwaahịa, elektrọnik, arịa ụlọ, ịchọ mma, nhazi igwe na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ọtụtụ ngwaahịa na teknụzụ enwetala ikike mba na ikike nwebisiinka nke ngwanrọ wee nweta nnabata CE na FDA.
1.Professional ọrụ n'oge dum iji usoro, 24 awa guzo maka ajụjụ gị.
2.Full ngwaahịa akara
Kwesighi ịhazi ọtụtụ ụlọ ọrụ iji chọpụta ụdị ngwaahịa ịchọrọ, wee jụọ onye dị iche iche na ụlọ ọrụ dị iche iche. Nwere ike ịchọta ihe niile ebe a ma kpọtụrụ naanị otu onye ka ị nweta ihe ị chọrọ.
3.Strict quality nnyocha usoro, 100% nnyocha ọnụego tupu Ẹnam ekese.
Ihe karịrị afọ 12 na ahụmịhe na ụlọ ọrụ azụmaahịa mba ofesi, na-enye gị nkọwa ndị ọkachamara ọ bụghị naanị na ngwaahịa kamakwa na usoro dum site na A ruo Z, dị ka ihe gbasara omenala, mbupu, nsogbu ụtụ na ihe ndị ọzọ.
1. Quality CNC machined akụkụ maka anwụ na-ekwe nkwa
2. Kwalitere njikwa bọọdụ maka mmezi ego kwesịrị ekwesị
3. Ike iyuzucha ofufe maka anwuru ọkụ na anwụrụ ọkụ mmịpụta
4. Ọdụ USB iji jikọọ ihe osise ahụ
5. Windows 8, 7 (64 ma ọ bụ 32 bit), XP, 2000 dakọtara (B NOTGH compatible dakọtara na sistemụ iOS)
6. FDA gbaara
Ka emekwara ka China mara na ụwa.
Mee ka ndị anyị na ha na-azụ ahịa mee ka ọ dịkwuo mfe.